Xukun lagu riday Askar kufsi u geystay Gabar 13 jir ah | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Xukun lagu riday Askar kufsi u geystay Gabar 13 jir ah
Maxkmada Magaalada Ceerigaabo ee Gobolka Sanaag ee Somaliland ayaa Maanta waxaa ay xukun ku riday Afar askari oo ka tirsan Ciidamada Booliska Somaliland, kuwaas oo lagu helay inay kufsadeen Gabar 13 jir ah.
Falka kufsiga ah ayaa bartamihii sanadkaan waxaa uu dhacay Magaalada Ceelafweyn, waxaana raggaas gacanta kusoo dhigay kadib howlgal ay sameeyeen Ciidamada Booliska Somaliland ee ka howlgalla Gobolka Sanaag.
Garsooraha Maxkamadda Magaalada Ceerigaabo oo xukunka ku dhawaaqay ayaa sheegay in Afarta Askari lagu xukumay min 7 Sano oo Xabsi ah, kadib markii uu ku cadaaday falka kufsiga ah ee lagu eedeeyay.
Goobta xukunka uu ka dhacayay ee Maxkamadda Magaalada Ceerigaabo ayaa waxaa ku sugnaa Waalidiinta Gabadha la kufsaday iyo ehellada Afarta Askari ee kufsiga lagu helay, waxaana raggaan Maxkamadeyntooda ay soo martay heerar kala duwan.
Maxkamadaha Somaliland ayaa dhowr jeer oo kala duwan waxaa ay xukuno ku rideen rag ku eedeysan kufsi loo geystay Gabdho aad u da’yar, taas oo keentay inay yaraadaan falalka kufsiga ah ee ka dhacaya degaannada Somaliland.